लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु- समाचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण ३१, २०७७ सन्जु पौडेल
तिलोत्तमा, रुपन्देही — रुपन्देहीको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत कपिलवस्तु–७ मायादेवी का एक जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ ।
शनिबार बिहान ती व्यक्तिको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । बुटवलस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको ‘एक्सपर्ट एक्सप्रेस सार्स कोभ–२’ प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनमा कोरोना देखिएको अस्पतालका मेडिसिन डिपार्टमेन्ट प्रमुख डा. सुदर्शन थापाले बताए ।
साउन २९ गते अस्पताल भर्ना भएका उनलाई निमोनिया भएको थियो । २९ गते नै स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएकामा ३० गते आएको रिपोर्टको नतिजा प्रस्ट नआएकाले पुन: पीसीआर परीक्षणका लागि पठाइएको थियो । उक्त रिपोर्ट नआउँदै शनिबार बिहान एक्सपर्ट जाँच गरिएको डा. थापाले बताए ।
यसअघि पनि कपिलवस्तुका एक जनाको उपचारकै क्रममा बुटवलमा मृत्यु भएको थियो । कपिलवस्तुमा लक्षण देखिएका संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा थप ४ जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन् ।
प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७७ ११:४०
भक्तपुर — नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल मध्यपुर थिमिका ३ जना स्टाफ नर्ससहित ४ जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएपछि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरेको छ ।
मध्यपुर थिमि नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत ३ जना महिला स्टाफ नर्स र एक जना सहयोगीमा शुक्रबार कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अर्को निर्णय नभएसम्म अस्पातालको आईसीयू, ओपीडीलगायत सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । संक्रमित चारै जनालाई अस्पतालको आइसोलेसन गरेको जनाएको छ । अस्पतालको मेडिकल अफिसरलगायत कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७७ ११:३७